Posted by Fros on December 26, 2014
"ဖူးစာရှင်" post မှ အဖြေများ
Posted by Fros on December 25, 2014
Posted by Fros on December 24, 2014
Posted by Fros on December 14, 2014
Dynasty Warriors Series Games Games Guide Guide
Posted by Fros on December 06, 2014
အမျိုးသမီးများအတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ချစ်စရာ calender
Posted by Fros on December 04, 2014
Posted by Fros on December 02, 2014
Dynasty Warriors 8 Dynasty Warriors Series Games Games Guide Guide
အမျိုးသမီးများအတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်တ...
Dynasty Warriors 8: Empires All Events Unlock Guid...
delusioninabox: Daily #1,865! I don’t like to wait and that’s... - delusioninabox: *Daily #1,865! *I don’t like to wait and that’s why I’mapaladin. ¯\__(ツ)_/¯
Final Fantasy 13 ရဲ့ နောက်ကွယ်က ဒဏ္ဍာရီ
အခုပြောပြမယ့်အရာကတော့ Final Fantasy 13 ရဲ့ နောက်ကွယ်က ဒဏ္ဍာရီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Final Fantasy 13, Final Fantasy 13-2, Final Fantasy 13 Lightning Returns ဂိမ်း ၃ ခုလုံး ကစားဖူးသူမှသာ အခုပြောပြမယ့်အရာကို နားလည်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Main spoiler တွေ ပါတာမို့ မကစားဖူးသူများ မဖတ်ရင် ကောင်းပါလိမ့်မယ် ။ ဖတ်မိရင် ကိုယ်ကစားတဲ့အခါ အရသာပျက်နိုင်တာမို့လို့ပါ ။ Final Fantasy trilogy ကစားဖူးသမားတွေ အနေနဲ့ ကစားရင်း နားမလည်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေ အခု ဒီစာဖတ်ပြီးရင်တော့ ရှင်းလင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
=================== Fabula Nova Crystal လို့​ခေါ်တဲ့ စကြ၀ဠာ ကြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
God Bhunivelze က သူ့အ​မေ God Mwynn ကို သတ်​ပြီး Death of Realm (​သေဆုံးခြင်းနယ်​ပယ်​) ထဲ လွှင့်​ပစ်​လိုက်​တယ်​ ။ ဒီလို သတ်​ရခြင်းအ​ကြောင်းရင်းက Mortal World ဖြစ်​တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို သူ့တစ်​​ယောက်​တည်း အုပ်​စိုးချင်​လို့ပါပဲ ။ သူသတ်​ပစ်​လို့ သူ့အ​မေ ​သေသွား​ပေမယ့်​ သူ့အ​မေက Bhunivelze ဟာ တချိန်​ကျရင်​ ပျက်​စီးလိမ့်​မယ်​ဆိုတဲ့ ကျိန်​စာထားခဲ့တယ်​လို့ ယုံကြည်​ပြီး အစအနမကျန်​ အဆုံးသတ်​ပစ်​ဖိ…